कागतीको बोक्रा हाम्रो स्वास्थका लागि कति फाइदाजनक जान्नुहोस् ! कागतीको बोक्राका फाइदा | Samacharpati कागतीको बोक्रा हाम्रो स्वास्थका लागि कति फाइदाजनक जान्नुहोस् ! कागतीको बोक्राका फाइदा – Samacharpati
काठमाडौँ, ७ असोज । प्रायः तपाईं-हामी कागतीको रसलाई पानीमा मिसाएर पिउने गर्दछौं र त्यसको बोक्रा फालिदिन्छौं । त्यस्तै अचार-तरकारीमा पनि कागतीको रस निचोर्छौं र बोक्रालाई त्यसैगरी फालिदिन्छौं । तर, कागतीको बोक्रा हाम्रो स्वास्थका लागि कतिसम्म फाइदाजनक छ भन्ने कुरा आज हामी तपाईंहरुलाई बताइरहेका छौं ।
स्वास्थ र फिटनेसलाई कायम राख्नका लागि अचेल हामी विभिन्न प्रकारका एक्सपेरिमेन्टहरु गरिरहेका हुन्छौं । तर, घरमा नै उपलब्ध हुने केही त्यस्ता चिजहरु छन्, जसले हाम्रो स्वास्थ र फिटनेसलाई कायम राख्नका लागि सहयोग पुर्‍याउन सक्छन् । कागतीको बोक्रामा निकै नै गुणकारी तत्वहरु रहेका हुन्छन् । कागतीको बोक्राका फाइदाहरु के-के छन् त ?